Sheekada filimka Jawaan: filim Action la daawan karo leh Sai Dharam Tej bandhig ahaan ka baxsaday | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Jawaan: filim Action la daawan karo leh Sai Dharam Tej bandhig ahaan ka baxsaday
Jawaan waa filim Telugu oo Action ah kaasi oo tiyaatarada la saaray Jimcadii aan kasoo gudubnay waxaana hogaamiye ka ah Sai Dharam Tej.
Jilaayaasha filimkaan: Sai Dharam Tej, Mehrene Kaur Pirzada, Kota Srinivasa Rao, Prasanna Venkatesan, Satyam Rajesh
Director: B. S. V. Ravi
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 14-daqiiqo
Muxuu ku wanaagsan filimka Jaawan: Action heer sare ah, sheeko dhex dhexaad ah oo halmar la daawan karo, loolanka atooraha iyo laadarka iyo bandhiga guud ee Sai Dharam Teja sameeyay.
Muxuu ku liitaa filimka Jaawan: Qaabka sheekada loo qoray ma wanaagsano madaama jaceyl qasab ah iyo heeso aan loo baahneyn lagu soo kordhiyay filimkan, qaabka filimkaan loo faaf reebay duubista kadib ma wanaagsano waxa ku jiraan muuqaalo qaar mudnaa in laga jaro.
Fariinta Filimka Jaawan: Jai (Sai Dharam Tej) wuxuu hamigiisa yahay inuu la shaqeeyo waaxda qaranka cilmi baarista iyo hormarinta difaaca dalka waana wiil caqli badan oo xeeladiisa u dheer tahay karti iyo geesinimo sidoo kalena dalkiisa ayu xitaa qoyskiisa ka hormariyaa.
Keshava (Prasanna) waa dambiile aan nixin kaasi oo qorsheenayo inu dhaco gantaalada ridada dheer ee waaxda difaaca Hindiya heestaan.
Jai (Sai Dharam Tej) marka uu ogaado halista uu waaxda difaaca Hindiya ku haayo Keshava (Prasanna) wuxuu dagaa qorshe uu kaga hortagaayo kadibna labadooda waxaa ka dhex qarxaayo dagaal aan dhamad laheyn oo aan waxba la isku reebaneyn!
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Jaawan: Director B. S. V. Ravi sheeko wacan ayuu diyaariyay balse dadaalkiisa gadaal ayuu kaga cayaaray waayo Jaawan wuxuu ku wanaagsanaa kaliya in diirada laga saaro mowduuca loolanka atooraha iyo laadarka ka dhaxeeyo inu diirada saaro balse jaceyl aan loo baahneyn ayuu soo dhex galiyay oo ka dhigay filimka Jaawan mid nuxurka meelaha qaar uu beelo.
Bandhiga Jilaayaasha: Sai Dharam Tej bandhig heer sare ah ayuu la yimid wuxuuna sameenaya Action-mo kusoo jiidanayo sidoo kalena doorkiisa waa mid si wacan loo diyaariyay.
Prasanna oo ah laadarka filimkaan isagana door wacan aya la siiyay sidoo kalena si kusoo jiidaneso ayuu Sia Dharam Tej ula qeebsanaa filimkaan xifaaltan ahaan iyo dagaal ahaan.
Balse nasiib daro dhamaan jilaayasha kale ee Jaawan kasoo muuqdeen door wacan kuma dhicin haba ugu horeyso Mehreen taasi oo la arkaayo kaliya marka hees la qaadayo halkii filimka ay micno u sameyn laheyd.
Gunaanad: Jaawan hadii fariintiisa Action-ka iyo qayaanada si toos ah loogu deyn lahaa wuxuu noqon lahaa filim aan laga xiiso dhigeyn balse jaceyl iyo heeso aan loo baahneyn ayaa filimkaan xiisaha ka dilayaan mararka qaar.
Jaawan waxaa la siiyay 2 xidig 2/5 taasi oo ka dhigan in sheekadiisa mid adag ahayn sidaa darteed bandhigiisa Boxoffice-ka masii socon doono wixii ka dambeeyo sedexda maalmood ee ugu horeyso.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Jawaan:
Waxaa Aqrisay 726